ओली-प्रचण्ड आज पनि छलफलमा, के छन् एजेण्डा? - Rajmarga
ओली-प्रचण्ड आज पनि छलफलमा, के छन् एजेण्डा?
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बिचको नियमित छलफल सुरु भएको छ। केहीबेर अघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार छलफल सुरु भएको हो।
आज पनि नियमित रूपमा छलफल भइरहेका विषयमा छलफल हुने बुझिएको छ। विशेष गरी छलफल सचिवालय बैठकका प्रस्तावित एजेण्डा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, पार्टीको सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम टुंग्याउने तथा राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिमा केन्द्रित हुने बताइएको छ।
गत बिहीबार अध्यक्षद्वयबीच पार्टीको सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम टुंग्याउने विषयमा छलफल भएको थियो। सोही दिन दुई अध्यक्षबीच छलफल गर्दै एकताका बाँकी काम सक्ने सन्दर्भमा ठोस निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी भएको थियो। सचिवालयका प्रस्तावित एजेण्डामाथि सहमति जुटाउन उनीहरू निरन्तर छलफलमा छन्। उनीहरुबीच समझदारी बन्ने बित्तिकै केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको छ।
गत असोज ६ गते बसेको सचिवालय बैठकले एकताको बाँकी काम टुंग्याउन प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा अध्यक्षद्वय र महासचिवलाई दिएको थियो। भदौमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले पनि असोज महिनाभित्र एकतालाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको थियो। अहिलेसम्म एकताको बाँकी काम टुंग्याउन प्रस्ताव तयार पार्न सकेका छैनन्। नेकपामा जनसंगठनहरू, पाँच वटा निकाय, ३२ विभागसहित एक नीति प्रतिष्ठान, प्रवास समन्वय र विशेष जिल्ला कमिटीले पूर्णता पाउन बाँकी छ।
Previous post:युवालाई स्वरोजगार बनाई विदेश जान रोक्नुपर्छ : मन्त्री ज्ञवाली
Next post:काठमाडौं उपत्यकामा एकैदिनमा २६७२ जना काेराेना संक्रमित